နိုင်​ငံတကာသတင်း – Page2– PoPinVdo
September 19, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​သတင်း / နိုင်​ငံတကာသတင်းNo Comment on ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကား အင်တာနက်လင့်ကို မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကုလအဖွဲ့အစည်းထံပေးပို့
Bruce Lee တစ်ဖန်ပြန်လည်ရှင်သန်မွေးဖွားလာခဲ့လေပြီ…
September 19, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​ထူးဆန်းထွေလာ / သတင်း / သတင်းထူး / နိုင်​ငံတကာသတင်းNo Comment on Bruce Lee တစ်ဖန်ပြန်လည်ရှင်သန်မွေးဖွားလာခဲ့လေပြီ…
(၁၂) ယောက်လုံး ကို တကယ် ချစ်ခဲ့တာတဲ့
September 18, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​ကြားရသိရသမျှ / သတင်း / နိုင်​ငံတကာသတင်းNo Comment on (၁၂) ယောက်လုံး ကို တကယ် ချစ်ခဲ့တာတဲ့
Galaxy Note9ဖုန်း မီးစွဲလောင်မှုကြောင့် Samsung ကို တရားစွဲဆို
September 18, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​IT နည်းပညာ ဗဟုသုတ / နိုင်​ငံတကာသတင်းNo Comment on Galaxy Note9ဖုန်း မီးစွဲလောင်မှုကြောင့် Samsung ကို တရားစွဲဆို
မူလတန်းအရွယ်မှာ စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမ အတွက် အသည်းပေးလှူတဲ့ ဆရာဝန်လောင်း
September 16, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)နိုင်​ငံတကာသတင်းNo Comment on မူလတန်းအရွယ်မှာ စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမ အတွက် အသည်းပေးလှူတဲ့ ဆရာဝန်လောင်း
မလေးရှားနိုင်ငံမှ ဆေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ ဆရာဝန်လောင်း အမျိုးသားတစ်ဦးက ၎င်းရဲ့အသည်း သုံးပုံနှစ်ပုံအထိကို ငယ်စဉ်က ပညာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ မူလတန်းပြဆရာမအတွက် အသည်းအစားထိုး ကုသနိုင်ရန် ပေးလှူခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ချန်ဇီရောင်းအမည်ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားက ၎င်းရဲ့အသည်း ၆၇…
မက်ဆီလား? ရော်နယ်ဒိုလား? ဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ် ဂန္တ၀င်တွေ ဘယ်လိုဖြေခဲ့ကြလဲ?
September 10, 2018 ​ရွှေ မိုး ညိုနိုင်​ငံတကာသတင်းNo Comment on မက်ဆီလား? ရော်နယ်ဒိုလား? ဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ် ဂန္တ၀င်တွေ ဘယ်လိုဖြေခဲ့ကြလဲ?
၂၁ရာစုမှာ ဘောလုံးပွဲကြည့်ခွင့်ရတာ ကံကောင်းတယ်လို့ ဘောလုံးပရိသတ်တွေက ဆိုစမှတ်ပြုကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုတို့လို ကစားသမား၂ဦးကို ဘောလုံးခေတ် တစ်ခေတ်မှာ တစ်ပြိုင်တည်း မြင်တွေ့ခွင့်ရလို့ပါပဲ။ သူတို့၂ဦးဟာ အသင်းအတွက် အောင်မြင်မှုတွေ၊ တစ်ကိုယ်တော် ထူးချွန်ဆုတွေ အလီလီရယူနိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကင်း…
စက်ဘီးသမားတစ်ယောက်ထဲကို ကားပေါ်ကလူတွေက ဆင်းပြီး ၀ိုင်းထိုး ကားပေါ်ပါလာတဲ့ ဓါးနဲ့ ခုတ်တယ်.. စက်ဘီးသမားက လူသတ်တရာခံဖြစ်တယ်
September 9, 2018 ​ရွှေ မိုး ညိုနိုင်​ငံတကာသတင်းNo Comment on စက်ဘီးသမားတစ်ယောက်ထဲကို ကားပေါ်ကလူတွေက ဆင်းပြီး ၀ိုင်းထိုး ကားပေါ်ပါလာတဲ့ ဓါးနဲ့ ခုတ်တယ်.. စက်ဘီးသမားက လူသတ်တရာခံဖြစ်တယ်
လမ်းလုရာကနေ ရန်စထိုးကြိတ် ဓါးနဲ့ခုတ်ခံရသူက လူသတ်တရားခံပြန်ဖြစ် တရုပ်နိုင်ငံ ဂျင်ဆူးပြည်နယ်က ကူရှန်းမြို့ပေါ်တွင် တနင်္လာနေ့ညက ကားလမ်းလုရင်း ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ကြပြီး လူတစ်ယောက်ကို အုပ်စုဖွဲ့ ကာ ထိုးကြိတ်၊ ဓါးနဲ့ခုတ်ခဲ့ရာမှ တစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့သည်။ အဆိုပါအမှုတွင် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသူကို လူသတ်တရားခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးခဲ့သည့်အတွက်…
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ချင်တဲ့ တရုတ်အမျိုးသားတစ်ဦး လက်ဗလာနဲ့တိုက် ၁၆ထပ်ကိုတွယ်တက်
September 8, 2018 ​ရွှေ မိုး ညိုနိုင်​ငံတကာသတင်းNo Comment on ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ချင်တဲ့ တရုတ်အမျိုးသားတစ်ဦး လက်ဗလာနဲ့တိုက် ၁၆ထပ်ကိုတွယ်တက်
ချုံချင်း(တရုတ်)၊ စက်တင်ဘာ ၇ တရုတ်နိုင်ငံ ချုံချင်းမြို့ကတရုတ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာတိုက်တစ် လုံးရဲ့ ၁၆ထပ်အမြင့်အထိလက်ဗလာနဲ့ တွယ်တက်ခဲ့ တာကြောင့်ရဲ တပ်ဖွဲကတားမြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသားဟာသူရည်းစားဟောင်းနေထိုင်တဲ့တိုက်ရဲ့  ၁၆ထပ်ကတို တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်နေရာကိုရောက်ရှိလာ တဲ့ လြုံခုံရေးတွေအပါအ၀င် မီးသတ်တပ်ဖွဲတွေပူးပေါင်းပြီး ကာကွယ်ပေး ဖို…
ဖခင်က အရမ်းချစ်တဲ့ လင်ပါသမီးကို အုပ်စုနဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်ခိုင်းတဲ့ မိထွေး
September 7, 2018 ​ရွှေ မိုး ညိုနိုင်​ငံတကာသတင်းNo Comment on ဖခင်က အရမ်းချစ်တဲ့ လင်ပါသမီးကို အုပ်စုနဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်ခိုင်းတဲ့ မိထွေး
လင်ပါသမီးကို အုပ်စုနဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်ခိုင်းတဲ့ မိထွေးကို ဖမ်းဆီး အိန္ဒိယ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ကက်ရ်ှမီးယား ဒေသမှာ ၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတယောက်ကို အုပ်စုဖွဲ့ပြီး အဓမ္မကျင့်မှု၊ သတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ လူ ၆ ယောက်ကို ဖမ်းထားပါတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့…